RASMI: Xidhiidhka Kubbada Cagta Aduunka Ee FIFA Oo Go’aan Rasmi Ah Ka Gaadhay Dacwadii Uu Neymar Jr Ka Gudbiyay Barcelona Ee Lacagtii Gunada Ahayd Ee Loo Diiday. – GOOL24.NET
Xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA ayaa maanta go’aan rasmi ah ka gaadhay dacwadii uu xidiga xulka qaranka Brazil iyo kooxda PSG ee Neymar Jr uu ka gudbiyay kooxdiisii hore ee Barcelona kaas oo uu ku dalbanayay lacag guno ahayd oo uu ku heli lahaa heshiiskii cusbaa ee uu Barca u saxiixay ka hor intii ayna PSG bixin lacagta lagu burburin karayay.
Khilaafka maamulka Barcelona iyo Neymar Jr ayaa meel xun gaadhay kadib markii ay labada dhinac laba dacwadood oo kala duwan u gudbiyeen FIFA iyada oo Barcelona ku dacwoonaysay in Neymar Jr uu jabiyay qodob ku jiray heshiiskii cusbaa ee uu kooxdeeda u saxiixay isla markaana ay waajib ku tahay in uu soo celiyo lacagta gunada ahayd qayb ka mid ah oo uu qaatay.
Laakiin Neymar Jr ayaa ku doodayay in maamulka Barcelona ay u diideen lacag uu xaq ugu lahaa maadaama oo uu heshiiska cusub u saxiixay isla markaana uu kooxda daacad u ahaa waqtigii uu joogay laakiin ugu danbayn FIFA ayaa maanta Neymar Jr ka soo diiday dacwada uu u gudbiyay iyaga oo u sheegay in ayna arintan soo dhex gali karin maadaama oo ay Barca kiiska maxkamada Spain ah ka furatay.
Neymar Jr ayaa Barcelona ku soo dacweeyay in ayna siin lacag dhan 40 milyan euros oo ahayd lacag uu ku heli lahaa in uu heshiiskiisa Barcelona cusboonaysiiyay sanadkii 2016 kii laakiin maamulka Barcelona ayaa dhinacooda ku dooday in xidiga ree Brazil uu khiyaameeyay isla markaana ayna lacagtan xaq u lahayn balse ay iyagu ka doonayaan qayb uu lacagtan ka qaatay iyo waliba lacag ilaa 75 milyan euros ah oo khiyaano ahaan ugu soo oogeen.
War rasmi ah oo ka soo baxay FIFA ayaa lagu cadeeyay in kiiskii uu Neymar Jr u gudbayay xafiiskooda si rasmi ah loo xidhay isla markaana ayna sii wadi doonin baadhitaanka dacwadan iyada oo lagu sheegay in kiisas isku mid ahi ay iska barbar socdaan.
Barcelona ayaa maxkamad dalka Spain ah ka furatay kiis ay Neymar Jr ugu soo oogtay danbiyo kala ah in uu jabiyay heshiiskii cusbaa ee uu saxiixay, in uu soo celiyo qayb ka mid ah lacagtii gunada ahayd ee heshiis cusboonaysiinta iyo waliba waxyeeladii uu kooxda ugu gaystay qaabkii xumayd uu PSG ugu ogolaaday in heshiiskiisa ay u burburiso.
Maamulka Barcelona ayaa hadda haysta fursad ay kiiskan ugu sii adkayn karaan xidiga ree Brazil maadaama oo uu ku fashilmay in uu gacan ka helo FIFA iyada oo halkii uu lacag ka doonayay hadda ay u muuqato in isaga lacag laga doonayo.